ဥပဒေပြဌာန်း၍ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရကြောင်း၊ ပြည်သူ ကြား က ရိုဟင်ဂျာ စကား | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ဒေသကြီး၊အစိုးရရုံးအဖွဲ့ရုံး၊အစည်းခန်းမ၌ ပြုလုပ်သော ဘာသာပေါင်းစုံမှချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ နှင့်မြန် မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေး ကော် မရှင် အဖွဲ့ တို့ ကို တွေ့ဆုံပွဲ တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မိမိနိုင်ငံ တွင် လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးခွဲခြားမှုကို လုံ့ဝလက်မခံဟု မိန့်ကြားခဲ့ သည့်အပြင် အောက်ပါစာပိုဒ်ကိုလည်း တင်ပြခဲ့ကြောင်းတွေ့ ရ သည်။
ထိုကဲ့သိုမိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ သမိုင်းအထောက်အထားများလုံ့ဝလွှဲချော်နေပါကြောင်း၊အောက်တွင် သမိုင်းနှင့်အထောက်အထားတကွရှင်းလင်းတင်ပြ ပါသည်။
ဥပဒေပြဌာန်းပြီးတိုင်းရင်းသား(၁၄၃)မျိုးမှရိုဟင်ဂျာအပေါင်းပါလူမျိုး(၉)မျိုးကိုဖြုတ်ချြ့ပီး နိုင်ငံတကာစံမမီသော ၁၉၈၂ ခု နိုင်ငံသား ဥပဒေ ဖြင့်လူမျိုး(၁၃၅)မျိုးဟု တစ်ဖက်သတ် သတ် မှတ် ၍ရခိုင်ပြည်နယ်မွတ်ဆလင်များကို လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြား ဆက်ဆံလျက်ရှိသည်မှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ကပင် အသိအမှတ်ပြု ထားပြီးဖြစ်သည်။
ယခင်ရိုဟင်ဂျာ အမည်ကို အသိပြုထားပြီး၊ ရေဒီယိုမှတဆင့် တိုင်းရင်းသား အစီစဉ် ကို တပတ်လျှင် ၂ ကြိမ်ကျ အသံလွင့် ခဲ့ကြောင်း ၊စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၉)မေယု ခရိုင် ခေါင်း စဉ်အောက်တွင် ၎င်းနေရာတွင် နေထိုင် သော လူမျိုးများသည် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ် သော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး များဖြစ်ကြောင်း၊နေထိုင်သူလူဦးရေ၏ ၉၇% ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ထားကြောင်းတွေ့နိုင်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာ လုံ့ဝမရှိဟု အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆန်နေသည် ပြသနာတစ်ခုကို ပြေလေ အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မည် မဟုတ် ပေ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၁၈၂) နိုင်ငံမှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ ခိုင်လုံသော အထောက် အထားအရ အသိအမှပြုထားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ဘင်္ဂါလီဟု သုံးနုံးလျက် သည်။လူဦးရေစစ်ဆေးနေသည် အချိန်တွင် ပုံစံစာရွက်၏ခေါင်းစည်းတွင် (ဘင်္ဂလီ ဆွဲ တင် စစ်ဆေး) ဆို၍ပါသည့် အတွက် ဒေသခံ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင် ထိပ်တိုက်ရင် ဆိုင် မှု များဖြစ် လာခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ စစ်ဆေးချက်အပေါ် တာဝန်ဝတ္တရားနှောက်ယှက်သည်ဟုဆိုပြီး ဦးကျော်မြင့်နှင့် အပေါင်းပါ တစ်စု ကို ဖမ်းစီးစစ်ဆေး လျက်ရှိသည်။ထို အပြင် မကြာသေမီးက ရှေ့နေ ဦးကျော်လှအောင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစု ခေါင်ဆောင်ဖြစ်နေ၍ ၎င်းရှေ့နေ ဦးကျော်လှအောင် ကို လည်း ဖမ်းစီးစစ်ဆေးလျက် ရှိသည်။
အချုပ်ဆိုရလျှင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး၊မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် မပြုသရွေး ကာလပတ်လုံး ပြသနာတက်နေမည် သာဖြစ်ပြီး။ပြည်တွင်းပြ သနာ မှဒေသ တွင်းပြသနာ၊ ကမ္ဘာ့ပြသနာအထိရောက် သွားနေပြီဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များက ဘင်္ဂလီ မဟုတ်ဘဲ ဘင်္ဂလီဟု သတ် မှတ်ခြင်း၊ ထိုကဲ့ သို့ သတ်မှတ်ပြီးလျှင် ဘင်္ဂလားဒေရှ် ခိုးဝင်လာသူများဖြစ်၍ ၎င်းတို့ အားလုံးဧည့် နိုင်ငံ သား၊ပြုနိုင်ငံ သား၊နိုင်ငံခြားသား ဟု သတ်မှတ်ရန် ရယ်ရွယ်သည်ဟုရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများက ယုံကြည်ထားသည်။
ယခင်ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး ၊တိုင်းရင်းသား အစီစဉ်တွင် အသံလွင့်ခွင့်ရရှိခဲ့သော လူမျိုးတစ်မျိုးကို အခု နိုင်ငံခြားသား အဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယ အဆင့် လျော့ချသတ်မှတ်သည်ကို လက်ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြ လိုက်ရပေသည်။
၁၉၉၇ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ်-၃၄/၉၇(၃)ဖြင့် “သာသနာရောင် ၀ါထွန်း စေဖို့”စာအုပ်ကိုဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး ၀င်းမောင်၊ ဦးစီးအရာရှိ (ပထမ တန်း) ပြန် လည်နေ ရာ ချထားရေးညွှန် ကြားရေးမှူးရုံး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနမှ ထုတ်ဝေသည့်စာအုပ်တွင် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီး သဘောင်္များ ပျက် ခဲ့ သဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သဘောင်္ သား များ ထို စဉ် အခါကပင် ရမ်းဗြဲကျွန်း တွင် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။
ရခိုင်ဘုရင်မဟာတိုင်စန္ဒလက်ထက် အေဒီ၇၈၈-၈၁၀တွင် ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီး သဘောင်္ များစွာပျက်ခဲ့ကြောင်း အစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င် သဘောင်္သားများအား ရခိုင်ပြည်မ သို့ပို့ ကာ ကျေး ရွာများတွင် အတည်တကျနေရာ ချထားပေး ခဲ့ ကြောင်း တွေ့ရ၏ ဟုဖော်ပြ ထားပါသည်။
ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ မှထုတ်ဝေ သော မြန်မာမင်းအုပ်ချုပ်ပုံစာတမ်းနှင့်ဘိုးတော်ဘုရား၏ ရာဇသတ်ခေါ်သော အမိန့် တော်ပြန်တမ်းကြီးစတုတ္ထပိုင်း၊ စာ(၂၅၄)။အေဒီ၁၇၉၉ ခုနှစ် ထုတ် သုတေသီ Francis Buchanan, M.D\_A Comprative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire အမည်ရှိ စာအုပ် မှာ အေဒီ(၁၇၇၉) တွင် အင်းဝ၌ရုံးစိုက်သော ဗြိတိသျှသံအဖွဲ့ဝင် Francis Buchanan ကမြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်း သားစကားများကို သုတေသနပြုခဲ့ရာ အာရ်ကန်ဒေသ အတွင်းရှိ စကားများ တွင် Rosswan နှင့် Rooinga (ရိုဟင်ဂျာ) စကားနှစ်မျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း ၍လေ့ လာ သုံးသပ်တင်ပြထားပါသည်။ ထိုသုတေသနစာတမ်း၏ စာမျက်နှာ (၄၃) တွင် Mr. Rennell has been induced to makeacountry named Roshaum occupy part of his map ဟူ၍လည်းကောင်း၊ The Mahommedanssettled at Arkan, call the country Rovingaw, the Persians call it Rekan ဟူ၍လည်းကောင်း၊ စာမျက်နှာ (၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇)တို့တွင် the first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga, or natives of Arkan ဟူ၍လည်းကောင်း ရေးသားပါရှိပြီး Rooinga စကား၊ Rossawan စကား၊ Banga စကားတို့၏ ခြားနားချက်အဖြစ် စကားလုံး(၅၀) ကိုဥပမာအဖြစ် ဖော်ပြထားသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာစကားနှင့် ဘင်္ဂါစကား ကွာခြားချက်ရှိကြောင်း တွေ့မြင် နိုင်ပါသည်။
ယနေ့ရိုဟင်ဂျာများပြောသော စကားကို ဘင်္ဂါလီစကားထင်ယောင်ထင်မှား ရှိသော် လည်း အမှန်မှာရိုဟင်ဂျာ များပြော သော စကားမှာ သမိုင်းတင် ဝေသာလီစကားပင်ဖြစ် ပါ သည်။
အေဒီ ၁၈၁၁ ခုနှစ်၊ လန်ဒန်မြို့မှ ထုတ်ဝေသည့် The classic Journal Vol:4, By A-J Valpy ဆိုသူမှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ရာ ထိုစာ အုပ်၏ စာမျက်နှာ (၃၄၈) နှင့် (၅၃၅) တို့တွင် ရိုဟင်ဂျာ အမည် ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြ ထားခြင်း တို့ ကိုတွေ့ရှိရပါ သည်။*
အာရကန်ဒေသစစ်တွေခရိုင် တစ်ခုလုံး၏လူဦးရေသည် ၁၈၂၆ ခုနှစ် စာရင်း အရ Mughs 60%, Mussalman 30%, Burmese 10% ရှိကြောင်း ဖော်ပြ ထားပါသည်။ အာရကန် ဒေသမြောက်ဦးမြို့တွင် အရေးပိုင်ခန့်ပြီး ကျန်လေး ၀တီ တွင် ကျွန်းအုပ်များ ခန့်အပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ ရာ၊ ကျွန်းအုပ်ရာထူးများတွင် Arrancan Mussalman, Ramoo Mug, Arrancan Mug များအားခန့်အပ် ထားခဲ့ကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသဖြင့် ၁၈၂၆ ခုနှစ်အစီရင်ခံစာအရ ဆိုလျှင် ရိုဟင်ဂျာ များအား ArracanMussulman ဟုလည်းကောင်း၊ ယခု ရခိုင် ဆိုသူများအား Arracan Mug ဟုလည်းကောင်း၊ ဗမာများ အား Burmese ဟုလည်းကောင်းတရားဝင် ခေါ်ဝေါ်သုံးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါ သည်။ အဆိုပါ အစီ ရင်ခံစာ၏ စာမျက်နှာ (၂၄) တွင်အာရကန် ဒေသဖွား Arracan Mussalman တစ်ဦးဖြစ် သော Sheikh Soojah Kazee ကိုအုပ်ချုပ် ရေးနယ်မြေ အမှတ်(၃၅)၊ ၃၆) နှင့်(၃၇) တို့တွင် ကျွန်းအုပ်ခန့် ထားကြောင်း ရေးသား ထားပါသည်။လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် (၂၅-၉-၅၄)ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံ တော် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုက မြန်မာ့ အသံလွှင့် မိန့်ခွန်း တစ်ရပ်တွင် ရှင်းလင်းပြောကြား ရာ၌ဘူး သီးတောင် နှင့် မောင်တောမြို့နယ် အတွင်း မှာ နေ ထိုင်ကြသည့် ပြည်ထောင်စုသားများမှာ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုး သားများ ဖြစ်ကြောင်းမိန့် ကြားခဲ့ပါသည်။(၃.၁၁.၅၉) နေ့ နှင့် (၄.၁၁.၅၉)နေ့ တို့ တွင် ဘူးသီးတောင် မြို့ နယ်နှင့် မောင်တောမြို့နယ် တို့၌ နိုင်ငံတော် ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဘဆွေ မိန့်ခွန်းတွင် ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ချင်း၊ ရခိုင်ကဲ့သို့ပင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ သည်လည်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း မိန့် ကြား ခဲ့ပါသည်။
(၁၉၆၄)ခုနှစ် မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းထုတ်ဝေခဲ့ရာ စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ(၉)၊ စာ မျက် နှာ(၈၉) နှင့် (၉၀)တွင် မေယုနယ်ခြား ခရိုင် တွင် လူဦးရေ (၄)သိန်းကျော် (၅) သိန်း နီးပါး ရှိ၍ များသော အားဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် တံငါ လုပ် ငန်း များဖြင့် သာ အသက်မွေးကြသည်။ လူများစု ၇၅% မှာရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများဖြစ်၍ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ ခမွီးစသော တိုင်းရင်း သားလူမျိုးစုများ ရှိကြသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ဗြိတိသျှ စွယ်စုံ ကျမ်းတွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ နှင့် ပတ်သက်၍ ”Islamic Arakanese are known as Rohingyas,aname based on the historical name of the region, Rohang” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
တပ်မတော်ခေတ်ရေး စာစောင်များအနက် (၈.၈.၆၁) နေ့ထုတ် စာစောင် အတွဲ(၁၂)၊ အမှတ်(၉)တွင် “ပျောက်သော သူပြန် ၍ တွေ့သည့်ပမာ”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မေယုနယ်ခြား ခရိုင်မှ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားထု၏ မျိုးရိုးစဉ် ဆက်လေ့လာ တင်ပြ ချက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ဆောင်းပါးကိုထည့်သွင်း ဖော်ပြခဲ့ရာ မေယုနယ်ဟု သတ်မှတ်လိုက်သော ဘူးသီးတောင်၊ မောင် တော နယ် များတွင် (၉၇%) သည် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြ၏ ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုသောအခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနှုင့် ရိုဟင်ဂျာစကား တည်ရှိနေမှုကို (၁)ရခိုင်ဘုရင် များ ခေတ်နှင့် မြန်မာ ဘုရင်များခေတ် (၂)အင်္ဂလိပ် အစိုးရ အုပ်ချုပ် သည့်ခေတ် (၃) မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး ရရှိသောခေတ် ဟူ၍ ခေတ်သုံးခေတ်တွင် ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲအသိ အမှတ်ပြုခဲ့ သည့် သမိုင်းအထောက် အထား အချို့ ကိုကောက်နှုတ် တင်ပြ ထား သည့် စာတမ်း ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ ခေတ်သုံး ခေတ်တွင် လေ့လာသုံးသပ်ပါကယနေ့ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများသည် မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ တိုင်းရင်း သားနိုင် ငံသား များ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ထင် ရှားရှား တွေ့ မြင်နိုင် ပါသည်။
နှုတ် တစ်ရာစာတစ်လုံးဆိုသကဲ့သို့ နှုတ်အားဖြင့်ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း၊ သမိုင်း ထိန်ချန်စွပ်စွဲမှုများ ပြု လုပ်နိုင် သော်လည်း သမိုင်းအထောက်အထားများ၊အစီရင်ခံစာများ၊ နိုင်ငံတော် ၏ခေတ် အလိုက် အစိုးရများ၏ ကြေငြာချက်များ အသိ အမှတ်ပြုချက် များကိုမှု သမိုင်းလိမ်ဟု ငြင်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ်သည့် အပြင် အစိုးရအဆင့်ဆင့်၏ ထုတ်ပြန်ချက် များသည် ပင်ရင်းအထောက် အထား Primary Source ဟုသမိုင်းသုတေသီများက မှတ်ယူသည်မှာ အစဉ်အလာဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ သမိုင်းကိုပင်မဆိုထားဘိ၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လွပ်ရေး ရရှိပြီးခေတ်အဆက်ဆက် အစိုးရမင်း များ၏ အသိ အမှတ် ပြုချက်များ၊ အစိုးရဌာနများမှ တရားဝင် ထုတ်ဝေ သည့်စာအုပ်များ၊ စွယ်စုံကျမ်းနှင့် ကျောက်စာများစသည့် ပင်ရင်း အထောက်အထားများကိုပင် မသိကျိုးကျွံပြု၍ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများမရှိ၊ ဘင်္ဂါလီသာရှိသည်၊ အင်္ဂလိပ် အစိုးရခေတ်မှ စ၍ ၀င်ရောက် လာသူများဖြစ် သည်ဟု ပြော ဆိုသုံးနှုန်းနေမှု များသည် အမှန်တရားကိုလက် ကိုင် ပြုခြင်းမရှိ ဘဲ နိုင်လိုမင်း ထက်ပြုလိုသည့် သဘောဖြင့် ပြောဆိုစွပ်စွဲ မှုများဖြစ်၍ ဤစာတမ်းပါ အချက် အလက် များ၊ ဖြစ် ရန်မှန်များ၊ သမိုင်းမှန် များ၊အစီရင်ခံစာများစသည့် ပင်ရင်းအထောက်အထားများ၊ စာအုပ်စာပေမှတ် တမ်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာစကားနှင့် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး များ ရှေး ပဝေသဏီ ကပင် ဖြစ် တည်နေ သည့် အထောက်အထားများလေ့လာပါက ရိုဟင်ဂျာများသည် ခိုးဝင်လာသူ လုံးဝမဟုတ် ကြောင်းသိရှိနိုင်ပါသည်။
This entry was posted on July 28, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← These Photos documents said GENOCIDE, ဒီဓါတ်ပုံတွေက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ကြောင်း သက်သေခံချက် ဖြစ်တယ်။	Myanmar’s Rohingya Muslims flee to Australia →